‘उपभोक्ताबाट हैन निर्माण व्यवसायीमार्फत काम गराऊ’ | गृहपृष्ठ
Home विकास ‘उपभोक्ताबाट हैन निर्माण व्यवसायीमार्फत काम गराऊ’
काठमाडौं । उपभोक्ताले मेशिनको प्रयोगविना गर्न नसक्ने कामहरू निर्माण व्यवसायीमार्फत गराउनुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ । गत चैत २९ गते सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले यस्तो जोड दिएको हो ।
उपभोक्ता समितिले काम गर्न चाहिने हेभी मेशिनहरू प्रयोग गर्ने सहमति नलिई मेशिन प्रयोग गरेको र यो उपभोक्ता समितिको क्षमता बाहिरको भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपभोक्ता समितिहरू जटिल निर्माण कार्य गर्न भौतिक, प्राविधिक र अन्य कारणले सक्षम नभएकोले उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउने नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकले दिएको छ । महालेखाले जनसहभागिताको काम मात्र उपभोक्ता समितिबाट गराउनुपर्नेतर्फ पनि जोड दिएको छ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा ध्यान दिनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख भएको र सोअनुरूप हुन नसकेको निष्कर्ष पनि महालेखाकोे छ । ‘उपभोक्ता समितिबाट हेभी मेशिनहरू प्रयोग गरी जटिल काम गराउन नसकिने व्यवस्था छ । तर, उपभोक्ता समितिको नाममा काम गर्न दिने र समितिले ठेकेदारलाई ठेक्का दिने प्रचलन बढ्न थाल्यो,’ महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने ।
उपभोक्ता समितिसँग उपलब्ध पूँजी, प्राविधिक क्षमता र जनशक्तिको विश्लेषण गरी त्यस्ता समितिमार्फत काम गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सिँचाइ विभागले साना र मझौला सिँचाइ योजनाअन्तर्गतका सिँचाइ योजना स्वीकृत गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने व्यवस्था समावेश गरेकोले उपभोक्ता समितिको सहभागिता अनिवार्य हुन गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाले नहरको सर्भिस रोडको ग्राभेल, संरचना मर्मत र नहरको माटो झिक्ने काम एक उपभोक्ता समितिबाट २९ पटकसम्म गराई रू.६ करोड १५ लाख ९१ हजार भुक्तानी गरेको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा १० उपभोक्ता समितिमार्फत १७४ पटक काम गराई रू. ३० करोड २८ लाख २८ हजार भुक्तानी गरेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ ।
भूमिगत जलसिँचाइ विकास डिभिजन, लमहीले सो आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिहरूमार्फत ४१ डिप ट्यूबवेल जडान गरी रू. ७ करोड ८२ लाख ६९ हजार भुक्तानी दिएको छ । उपभोक्ता समितिबाट मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी र जनसहभागिताको अंशसमेत रू. १ करोडसम्म लागत अनुमानको काम गराउन सकिने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मझौला सिँचाइ योजनासमेत ४ कार्यालयहरूले लागत अनुमान रू. १ करोडभन्दा बढी हुने रू. ६ करोड ५८ लाख २५ हजार लागत अनुमानका ६ योजनाहरूको काम बोलपत्र छलेर उपभोक्ता समितिहरूमार्फत गराई रू. ५ करोड ७१ लाख ९६ हजार भुक्तानी दिएका छन् ।
सिँचाइ नीति, २०७० तथा सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा सम्पन्न सिँचाइ योजनाहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्न उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरी मर्मतसम्भार र सञ्चालन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सिँचाइ विभाग मातहतका सिँचाइ विकास डिभिजन दाङ, झापासमेत ६ कार्यालय तथा आयोजनाहरूबाट रू. ७३ करोड ८७ लाख ३२ हजारमा निर्मित १८२ सिँचाइ आयोजनाहरू हस्तान्तरण नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही कारणले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता समितिको दायित्वभित्र पर्ने मर्मतसम्भारको काम पनि सिँचाइ कार्यालयहरूले गरिरहेको र यस वर्ष त्यस्तो मर्मतसम्भारमा मात्र रू. १ अर्ब २४ करोड ११ लाख खर्च भएको निष्कर्ष महालेखाको छ ।
सिँचाइ प्रणालीहरू निर्माण भएपश्चात उपभोक्ता समितिहरूलाई हस्तान्तरण गरी मर्मत सम्भारको खर्च घटाउनुपर्नेमा पनि महालेखाले जोड दिएको छ । त्यस्तै, नयाँ शहरी योजना कार्यालय बाग्लुङले बुर्तिबाङ शहरमा ढल निर्माण कार्य गर्न २०७४ चैतमा स्वीकृत गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा रू. १४ करोड लाग्ने उल्लेख छ । उक्त कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट नगरी उक्त योजना टुक्रा पारी एक करोड रुपैयाँभित्रका रू. ४ करोड ५३ लाखको ६ प्याकेज बनाई उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गराइएको छ ।
निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय भेला आज
सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६५ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी
टेन्डर हाल्न पुगेका निर्माण व्यवसायीमाथि हातपात